Amaara m na SEOmoz nwere obere okwu ole na ole na ngwa okwu nkpuru okwu n'ime akuko nke ọdịnaya di elu, enweghi m ike igosi na mmefu na $ 49 kwa ọnwa na obere blog.
Okwu rịọrọ ka m mee nkwado blog na ha ma nwee mmasị ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ a. Wordze nwere $ 45 kwa ọnwa na ndenye aha ngwungwu ma ọ dị ka ịnwe mkpokọta ngwa ngwa kachasị ike m hụtụrụla gbasara nchọpụta isiokwu:
Bubata Keywords - ọ bụrụ na ị bụ onye pro na azụmaahịa ahụ, enwere ike ị rụzuola nyocha na isiokwu na n'oge gara aga. Wordze emeela ka ọ dịrị gị mfe ịbubata isiokwu gị ndị ọzọ na sistemụ ha.
isiokwu API - nke a bụ ihe siri ike siri ike API iji tinye Wordze n'ime usoro njikwa ọdịnaya ma ọ bụ ngwa gị. Ihe a masịrị m nke ukwuu - Ọ ga-amasị m ịhụ ka mmadụ na-etinye ihe nchịkọta akụkọ nke na-etinye ntụnye isiokwu ka ị na-ede.
Projects - ma ọ bụrụ na ị na-eme nnyocha na otutu oru, ngwa-enye gị ohere iji hazie gị Keywords n'ime oru maka ngwa ngwa nke ọ bụla nke ngwaọrụ.
Vidio - anaghị amasị ịgụ? Ndị folks a ebipụtala vidiyo na ngwaọrụ ha niile na otu esi eme ya n'ụzọ zuru ezu!